Ahoana no manify ny andilana? Teknika, torohevitra ary tsiambaratelo ho anao handresy ny vatana nofinofisinao hatrizay!
Aogositra 11, 2018 26 Novambra 2021
Ianaro ny fomba hanesorana ny andilana amin'ny fampiasana tsara ny fehikibo fanaingoana, miaraka amin'ny fanazaran-tena ara-batana miaraka amin'ny sakafo tsara. Jereo ny tip... Tohizo ny famakiana »Ahoana no manify ny andilana? Teknika, torohevitra ary tsiambaratelo ho anao handresy ny vatana nofinofisinao hatrizay!
Hiit: Fantaro ny tombontsoa sy ny famerana rehetra!
Aogositra 9, 2018 26 Novambra 2021
Hitt dia fanazaran-tena faran'izay mahery vaika izay azo atao amin'ny fomba maro, na aiza na aiza. Mitondra tombontsoa maro ity hetsika ara-batana ity... Tohizo ny famakiana »Hiit: Fantaro ny tombontsoa sy ny famerana rehetra!
Hitsambikina: Ny mpiara-dia aminao hanary lanja ... Ianaro bebe kokoa momba ity hetsika ity!
Aogositra 6, 2018 26 Novambra 2021
Ny mitsambikina dia hetsika miaraka amin'ny fandaniana kaloria avo, izay azo atao any amin'ny gym na ao an-trano. Mpiara-miasa tsara ho an'ireo mitady hampihena lanja, ny… Tohizo ny famakiana »Hitsambikina: Ny mpiara-dia aminao hanary lanja ... Ianaro bebe kokoa momba ity hetsika ity!
Massa miankina: Inona izany? Ahoana no handresena? Ny valinteninao rehetra eto!
Tsy azo lavina fa ny vatana manify sy mafy dia mirindra tsara ary tena manintona. Ao anatin’ny fikaroham-bahaolana, manao fanazaran-tena ny olona... Tohizo ny famakiana »Massa miankina: Inona izany? Ahoana no handresena? Ny valinteninao rehetra eto!
Ahoana ny fomba hampihenana haingana ny lanjany: jereo ireto toro-hevitra momba ny fihenan-danja ireto!
27 Jona 2018 29 Novambra 2021
Tsy asa tena mora ny mampihena lanja. Mandreraka, miadana ary mandany fotoana, indrindra rehefa tsy hainao izay ataonao... Tohizo ny famakiana »Ahoana ny fomba hampihenana haingana ny lanjany: jereo ireto toro-hevitra momba ny fihenan-danja ireto!
Lanja mety: Inona izany? Fantaro raha irery ianao!
29 Mey 2018 29 Novambra 2021
Ny fahafantarana ny lanja tsara indrindra dia zava-dehibe ho antsika hisorohana ny olana sasany toy ny tsy fahampian-tsakafo, ny diabeta ary ny matavy loatra aza.... Tohizo ny famakiana »Lanja mety: Inona izany? Fantaro raha irery ianao!
Aretina ve ny hatavezina? Jereo eto ny fampahalalana momba ny olana!
21 Mey 2018 29 Novambra 2021
Iray amin'ireo olana ara-pahasalamana lehibe indrindra eran-tany ny fitomboan'ny lanja tsy voafehy, nefa aretina ve ny matavy loatra? Tao anatin'ny folo taona,… Tohizo ny famakiana »Aretina ve ny hatavezina? Jereo eto ny fampahalalana momba ny olana!
Menio ambany karbônina: mampihena lanja ankehitriny mihinana!
Na iza na iza mitady hampihena lanja dia mety efa nandre momba ny sakafo ambany karbônina, sakafo izay tena mahomby amin'ny olona izay… Tohizo ny famakiana »Menio ambany karbônina: mampihena lanja ankehitriny mihinana!
Sakafo lasopy: tena mampihena ny lanjany ve? Jereo ny fomba fahandro!
13 Mey 2018 29 Novambra 2021
Betsaka ny olona tsy afa-po amin'ny vatany no mitady fomba hanampiana azy ireo hahatratra ny vatana tsara indrindra amin'ny fomba... Tohizo ny famakiana »Sakafo lasopy: tena mampihena ny lanjany ve? Jereo ny fomba fahandro!
Belly Negative: Torohevitra TSY MAINTSY amin'ny fananana iray!
Aprily 27, 2018 29 Novambra 2021
Lasa nofinofin’ny olona maro ny fananana vatana sokitra tahaka ny an’ny olo-malaza maro, saingy ny fahafahana manafoana ny kilao amin’ny… Tohizo ny famakiana »Belly Negative: Torohevitra TSY MAINTSY amin'ny fananana iray!